EMUI 10 oo deggan oo leh Android 10 ayaa imanaya taxanaha Huawei P30 | Androidsis
Xasiloon EMUI 10 oo leh Android 10 ayaa imanaya taxanaha Huawei P30
Sida MIUI 11 loogu kala dirayo qalabka Xiaomi iyo Redmi, EMUI 10, taas oo ah nooca cusub ee lakabaynta Huawei ee lakulmay telefonadooda casriga ah, ayaa loo soo bandhigayaa Huawei P30, inkasta oo ay horeba u heleen, waxa ay dhab ahaan helayaan waa beta ka, mana aha adduunka oo dhan.
Su'aasha, waa Huawei P30 iyo P30 Pro kuwaas oo u qalma in la yiraahdo qalab adag. Si kastaba ha noqotee, maahan in isticmaaleyaasha adduunka oo dhami ay hore u qaban karaan.
Hadda kaliya isticmaaleyaasha Huawei P30 ee Shiinaha ayaa hadda fiirin kara helitaanka EMUI 10 oo deggan oo ku saabsan qalabkooda, si ay u awoodaan inay u soo dejistaan ​​una rakibaan markasta oo ay rabaan. Wadamada kale wali waxay sugayaan inay u helaan sidooda oo kale, laakiin waxaan hubnaa in bixinta lakabkan uu dhowaan noqon doono mid caalami ah.
Xusuuso taas dhowr maalmood ka hor Waxaan fileynay in mobiladaan ay heli doonaan cusbooneysiinta bishan. Iyada oo kuwan ka baxsan - oo u dhow helitaanka EMUI 10 adduunka - waa arrin waqti ah ka hor inta aan terminal kale dhowaan la shaacin doonin si loo helo lakabka.
EMUI 10 waa cusbooneysiin weyn oo loogu talagalay taleefannada Huaweimaaddaama ay hagaajiso jilicsanaanta iyo waxqabadka qalabka jira. Shirkaddu xitaa waxay ku dartay nidaam mugdi ballaadhan oo nidaamsan oo xitaa ku qasbaya barnaamijyada aan lahayn qaab madow inay u hoggaansamaan. Qaab dhismeedka qaabeynta ayaa sifiican loogu abaabulay qaabkan cusub waxaana nidaamka qalliinka loogu talagalay in lagu bixiyo khibrad wanaagsan marka lala shaqeynayo aaladaha kale sida laptop-ka Windows 10. EMUI 10 waxay u oggolaaneysaa taleefanka casriga ah inuu si toos ah ugu shaashado shaashadiisa qalabka leh Windows 10, bixiya khibrad shaqo oo qumman. Cusbooneysiinta ayaa sidoo kale keeneysa astaamo ku habboon Android 10.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Xasiloon EMUI 10 oo leh Android 10 ayaa imanaya taxanaha Huawei P30
Toddobaadkan beta labaad ee One UI 2.0 ee Galaxy Note 10 ayaa laga bilaabi doonaa Spain
Beta-saddexaad ee Android 10 ee Galaxy S10 hadda waa la heli karaa